Will Ferrell naPaul Rudd nyeredzi muiyo Shrink Inotevera Door paApple TV + | Ndinobva mac
Will Ferrell naPaul Rudd nyeredzi muiyo Shrink Inotevera Door, paApple TV +
Mutsva mutsva anoratidza paApple TV + kufadza vese vanyoreri. Zvakare uchifunga kuti ine vaviri vevatambi vakanakisa kunze uko panguva ino. Zvirinani sekusvika kwekuseka. Tinotaura nezvazvo Will ferrell y Paul rudd iyo inotanga kuratidzwa akateedzana Iyo Shrink Inotevera Door. Tinogona kutsanangura iyi nhepfenyuro nyowani sedema dema. Inotaura nezvehukama hwakareba pakati pachiremba wepfungwa nemurwere wake mukuru.
Apple TV + yakaratidza pane yayo YouTube chiteshi mifananidzo yekutanga yeanomirirwa-marefu masere-episode miniseries Iyo Shrink Inotevera Musuwo. Iyo nyowani nyowani nhema ine nyeredzi-nyeredzi inotungamirwa inotungamirirwa naWill Ferrell naPaul Rudd, vanova zvakare vagadziri vakuru, uye vanotanga kuratidzwa pasirese neChishanu, Mbudzi 12, chete paApple TV +. Iyo nhepfenyuro ichatanga kuratidzwa nezvayo zvitsauko zvitatu zvekutanga, ichiteverwa neimwe nyowani Chishanu choga choga.
Akafuridzirwa nezviitiko zvechokwadi, nhepfenyuro inotaura nezvehukama husinganzwisisike pakati pemukurumbira wepfungwa chiremba Isaac Ike Herschkopf (Rudd) nemurwere wake kwenguva refu Martin aka Marty Markowitz (Ferrell). Muhukama hwavo hwese hwakareba, Ike zvishoma nezvishoma anopinda muhupenyu hwaMarty. Iwe unototama kupinda mumba make muHamptons uye kumugutsa kuti amugadze semutungamiri webhizinesi remhuri.
Iwo akateedzana anoongorora kuti hukama hunoratidzika kunge hwakajairika hwechiremba-nemurwere hunoshanduka sei kuita simba rekunyengerera. Iwo akateedzana zvakare nyeredzi Kathryn Hahn, uyo anotamba Phyllis, munin'ina waMarty, naCasey Wilson saBoniie, mudzimai waDr Herschkopf.
Inotungamirwa na Michael Showalter y Jesse peretz uye yakanyorwa naEmmy, Golden Globe, BAFTA, uye WGA anokunda Georgia Pritchett, Iyo Shrink Inotevera Door inobva kuCivic Center Media yakabatana neMRC Television. Iwo akateedzana akavakirwa pane iyo Podcast vakawanda vakateerera kwegore ra2019.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Will Ferrell naPaul Rudd nyeredzi muiyo Shrink Inotevera Door, paApple TV +
12 × 35 Podcast: Vhiki reBetas